နိုဝင်ဘာလ 4, 2017
နိုဝင်ဘာလ 7, 2017
ဒီအကြောင်းပြချက်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ, တဦးတည်းအရာများအတွက်, သငျသညျကိုကူညီနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျနော်တို့ဒူဘိုင်း, ဒူဘိုင်းအတွက် Headhunters နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများတစ်ဦးပြည့်စုံအီးမေးလ်နှင့်လိပ်စာစာရင်းဖန်တီးခဲ့ကြပြီး ပင်လယ်ကွေ့နှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းနေသောအလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများ။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရကိုကူညီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတစ်ခုချင်းစီကိုထမ်းရှာဖွေသူ မှစ. ငါတို့သည်တတ်နိုင်သလောက်များများအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိရန်ကြိုးစားပါ။ ဒူဘိုင်းစာရင်းထဲတွင်န်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေးသင်တစ်ဦးရရှိရန်ကူညီသင့်တယ် ဒူဘိုင်းကယောဘ.
ယခုကြှနျုပျတို့လည်းလူတွေအထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်စုဆောင်းဖို့ကူညီနေတာပါ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ယခုမိုဘိုင်းဖုန်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်ကူညီခြင်း အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်လည်းတောင်အာဖရိကနှင့်ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အတူ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီနှငျ့သငျ့အသေးစိတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအကွောငျးတှေ့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အအိပ်မက်မက်s ကို။ စမတ် Be, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကပေးပို့သင့် CV အပေါ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
သူတို့အခွအေနမြေိုး လက်ရှိတွင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှကူညီပေးနေ။ အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောရာထူးများအတွက်။ ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများရှာဖွေနေ မှလွဲ. ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူးအတွက်လမ်းလျှောက်အပေါ်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေစတင်ရန်။ ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသင်တို့ဆီသို့ပူဇော်နိုင်သလဲဆိုတာကြည့်ရှိသည်။
အဆိုပါ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြ updated ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းနှင့်အတူ။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အတွေ့လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံစာရင်းနှင့်အတူ။ ခြုံငုံ၌သင်တို့ကိုတိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းမန်နေဂျာမှ CV ကို Send။ ကုမ္ပဏီများတစ်ခုမှာ, သင်ပထမဦးဆုံးထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းနေကြဖို့ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ငါတို့သည်တစ်ဦးရှိ Careerjet အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေပေါ်တယ် နှင့် အင်ဒီးယန်းအကြားလူကြိုက်များတဲ့ Monster အလုပ်ပေါ်တယ်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများအသီးအသီးမှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုပို့ပါ။
အပြည့်အဝစာရင်းထဲမှာကိုသွားဖို့အတွက်အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. !.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီပြုကြပြီ မန်နေဂျာများငှားရမ်းအကြောင်းကိုသုတေသနပြု။ စိတ်၌ဤအတူကျနော်တို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာငှားရမ်းသူကအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်ရွေးကောက်တော်မူပြီ။ အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်ကိုသင်ကျိန်းသေမှာကြည့်သင့်ပါတယ် အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအလုပ်ရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတာကြည့်ရှိသည်။ မျှော်လင့်ချက် သငျသညျအသီးအသီးစုဆောင်းမှုအထူးကုတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်.
စုဆောင်းရေး၏အမည်: CV ကိုအတူ Link ကို Adresse E-mail ကို:
BAC အရှေ့အလယ်ပိုင်း https://www.bacme.com/jobboard/cands/candLogin.asp recruit@bacme.com
ရောဘတ်တစ်ဝက် https://www.roberthalf.ae/submit-cv dubai@roberthalf.ae
ရွေးချယ်ရေးလာအောင်နှိုးဆွ http://www.inspireselection.com/candidate/register.asp info@inspireselection.com
ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်ခန့် https://gulfrecruiter.com/applicant/registration/ customercare@gulfrecruiter.com
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာန်ထမ်းခေါ်ယူမှု http://globalrecuae.com/contact_us.php info@globalrecuae.com
Jca Associates မှ http://www.jca-associates.com/register dubai@jca-associates.com
လူ့အရင်းအမြစ် Group မှ https://www.manpowergroup.ae/en/job-opportunities info@manpower-me.com
ဘော့်ထမ်းခေါ်ယူမှု https://www.cobaltrecruitment.com/candidates/register info@cobaltrecruitment.com
Lobo စီမံခန့်ခွဲမှု http://www.lobomanagement.com/register.aspx lobo@lobomanagement.com
Mackenzie ဂျုံးစ် http://mackenziejones.com/latest-jobs/ info@mackenziejones.com
မိုက်ကယ် 's Page https://www.michaelpage.ae/submit-your-cv candidatesmiddleeast@michaelpage.ae
Stanton တို့ Chase https://www.stantonchase.com/candidate-submission/ dubai@stantonchase.com
hr ရင်းမြစ် https://hrsource.ae/join-us/ info@hrsource.ae
Kinney ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေး http://www.kinneyrecruiting.com/register/ jobs@kinneyrecruiting.com
GoldBeck ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေး https://goldbeck.com/jobs-opportunities contact@goldbeck.com
ဆားငန် https://www.welovesalt.com/uae/jobs/ richard.smith@welovesalt.com
ရိဒ် https://www.reed.co.uk/jobs/jobs-in-dubai workforus@reedglobal.com
Accel နာရီ Consulting http://accel-hrconsulting.com/contact-us/ info@accelhrc.com
Spencer စတူးဝပ် https://candidateregistration.spencerstuart.com/ contact@spencerstuart.com
ESP အင်တာနေရှင်နယ် https://www.espinternational.ae/candidates.cms.asp info@espinternational.ae
mcg နှင့် Co. , http://www.mcgand.co/job-board/ uae@mcgand.co
တေလာ Root http://www.taylorroot.com/cvupload.aspx izgigenc@taylorroot.com
Russell Reynolds က http://www.russellreynolds.com/candidates lauren.taylor@russellreynolds.com
Morson Group မှ https://www.morson.com/online/login enquiries@morson.com
ဌါန https://departer.de/en/vacancies-international/ info@departer.com
လက်လှမ်းမမီ Group မှ http://careers.reachgroup.ae/ INFO@REACHGROUP.AE
ပင်လယ်ကွေ့်ထမ်းခေါ်ယူမှု Group မှ http://www.thegulfrecruitmentgroup.com/latest_job.php info@thegulfrecruitmentgroup.com
Swisslinx အရှေ့အလယ်ပိုင်း, Ltd. http://www.swisslinx.ae/en/europe/candidates/cv-registration dubai@swisslinx.com
ရောဘတ် Walters ကအရှေ့အလယ်ပိုင်း https://www.robertwalters.ae/account/login-register.html dubai@robertwalters.com
MRI Worldwide ၏ယူအေအီး http://jobs.mrinetwork.com/?sref=MRINetwork%20Website info@mriwwuae.ae
PSR အင်တာနေရှင်နယ် https://www.psrsolutions.ae/candidates/mydetails.aspx mpalmer@psrsolutions.com
ပထမဦးစွာ Resort ကို http://www.firstresortrecruitment.com/candidates/ cvs@firstresortrecruitment.com
အထည်အလိပ် http://www.fabricrecruitment.com/Perm-Clients.asp Justin.Kent@fabricrecruitment.com
နီလာ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအတိုင်ပင်ခံ DMCC http://sapphirerecruitment.ae/candidates/ info@sapphirerecruitment.ae
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာန်ထမ်းခေါ်ယူမှု https://db.grcfair.org/Logon.aspx info@grcfair.org
ဂဏန်း https://www.antal.com/register info@antal.com
ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 https://www.expo2020dubai.com/careers အီးမေးလ်ပို့ရန်ပေးမ
မက်ဒေါ်နယ်ကုမ္ပဏီ http://www.macdonaldandcompany.com/candidates lhall@macdonaldandcompany.com
ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း Staffing http://www.orbitstaffinginnovision.com/post-resume/ info@orbitsi.com
abc န်ထမ်းခေါ်ယူမှု http://www.abcrecruitment.ae/browse-by-category jobs@abcrecruitment.ae
ကြယ်ပွင့်န်ဆောင်မှုများယူအေအီး http://www.starservicesuae.com/SSCareers/feStarService/Default.aspx info@starservicesuae.com
Carter က Murray https://www.cartermurray.com/users/login info@cartermurray.com
ပြည်သူ့ရင်းမြစ် http://www.peoplesource-me.com/services.php resume@peoplesource-me.com
Hanson ရှာရန် https://www.hansonsearch.com/login/ dubai@hansonsearch.com
S ကသုံး Careers https://www.sthreecareers.com/en/contact-us careers-mei@sthree.com
Cooper က Fitch https://www.cooperfitch.ae/recruitment talktous@cooperfitch.ae
Ohr န်ထမ်းခေါ်ယူမှု https://ohrrecruitment.com/jobs/ info@ohrrecruitment.com
ထောင့်ကျောက်ခေတ် Group မှ https://www.cornerstone-group.com/contact/#consultant-search info@cornerstone-group.com
gm ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေး https://www.gmrecruiting.com/users/register apply@gmrecruiting.com
Aspire https://aspiriti.com/jobs contact@aspiriti.com
အလုပ်အမှုဆောင်ဖြေရှင်းချက် https://jobs.executivesolutionsme.com/en/job-search-results/ info@executivesolutionsme.com
တိုးတက်ရေးပါတီ်ထမ်းခေါ်ယူမှု https://www.progressiverecruitment.com/job-search prdubaiperm@progressiverecruitment.com
Davidson ဒူဘိုင်း http://www.davidsondubai.net/vacancies.aspx info@davidsondubai.com
အိမ်ဖော် CV ကို http://www.maidcv.com/Signup_Pay clients@maidcv.com
MBR န်ထမ်းခေါ်ယူမှု http://mbrrecruitment.com/advertising-and-marketing/send-us-your-cv.php info@mbrworldwide.com
အခွက်တဆယ်စီမံခန့်ခွဲမှု http://www.talentdubai.com/jobseeker_page.aspx info@talentdubai.com
နီဂျော့ဘ် https://www.visage.jobs/diversity.html team@visage.jobs
အလုပ်အမှုဆောင်ရှာရန်ချိတ်ဆက်ပါ http://www.connectexecutivesearch.com/candidates/ info@connectexecutivesearch.com
ရှာဖှေခွငျး https://www.questsearch.co.uk/job-search/ enquiries@questsearch.co.uk
Kash ကမ္တာ့ https://kashglobal.com/contact/ info@kashglobal.com
ရေနံအမှုဆောင်အရာရှိ http://www.oilexec.com/register.php info@oilexec.com
အစိမ်းရောင််ထမ်းခေါ်ယူမှုကုမ္ပဏီ https://www.greenrecruitmentcompany.com/users/register/new/registration info@greenrecruitmentcompany.com
ကျွမ်းကျင်သူများကန်ထမ်းခေါ်ယူမှု http://www.expertsrecruitment.com/service.html cv@xpertsjobs.com
အဆိုပါန်ထမ်းခေါ်ယူမှုပင် http://www.therecruitmenttree.com/candidates/ info@therecruitmenttree.com
ဖြစ်တဲ့ Warner ဖြစ်သူ Scott http://www.warnerscott.com/job-search/ uk@warnerscott.com
Talent ရွေ့ http://budgetalent.com/job.html hello@budgetalent.com
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ https://www.dubaicitycompany.com/upload-resume/ office@dubaicitycompany.com
ည TSA https://tsa-me.vincere.io/careers/submitCV marcus@tsa-me.com
ဂျယ်ရီ Varghese http://www.jerryvarghese.com/Job-Seekers/Search-Jobs/search_jobs.aspx jobseekers@jvi-global.com
IPC ပင်လယ်ကွေ့ http://www.icp-gulf.com/job-search/ recruit@icp-gulf.com
ဓာတ်ဆီအစီအစဉ် https://www.petroplan.com/login-register/ dubai@petroplan.com
Morpheus ပင်လယ်ကွေ့ http://morpheusgulf.com/submit-resume/ dubai@morpheusgulf.com
Alahad Group မှ http://www.alahadgroup.com/pm_registration/ info@alahadgroup.com
Hays ယူအေအီး & အရှေ့အလယ်ပိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီ
ထို့ကြောင့်ဒူဘိုင်းမှ အလုပ်အကိုင်စျေးကွက် ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ Hays အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့ဖြစ်၏ ်ထမ်းရှာဖွေသူနှင့်ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပံ့ပိုးပေး။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ယူအေအီးအတွက် Hays တစ်ဦးကျိန်းသေထူးခြားတဲ့စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စီမံခန့်ခွဲနေကြဘယ်မှာ ဖိလစျကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ရေရှည်မှာခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီအပေါငျးတို့သသောအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအတွေ့အကြုံကဆောင်တတ်၏ အလုပ်ရှာဖွေသူများကနေအကြိုးပွုနိုငျ။ ဤအချက်များအရ Hays headhunters နှင့်ယူအေအီးအတွက်အကြီးတန်းရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်အသည်းအသန်အဖွဲ့ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအနှစ်ချုပ်မှဒူဘိုင်းအတွက် Middlesex University မှအတူအလွန်နီးကပ်စွာပူးပေါင်း။
ယူအေအီးအတွက် Hays အလုပ်ခန့်အေဂျင်စီကိုဆက်သွယ်ပါ
ပထမဦးဆုံးအရာအရပျ၌, hays အတူတူတစ်မြှင့်တင်ရေးကိုဗီဒီယိုထားကြပြီ။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Hays သငျသညျကဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာထဲမှာအလုပ်တူရာ၏စိတ်ကူးတစ်ခုအားငါပေးမည်။ အဖြစ်မကြာမီသင်စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေးပို့အဖြစ်, သင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအတွက်အလုပ်နှင့်ဘဝလက်ကျန်ငွေကိုရှာဖွေ straightaway နိုင်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်း၏ဗဟိုမှာတော့ စုဆောင်းမှု, Hays ကုမ္ပဏီမှနေသားတကျဖြစ်လာကြပါပြီ အိန္ဒိယကနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများ, ပါကစ္စတန်, ဥရောပ, နှင့်အမေရိကန်
ဒီအခြမ်းတွင် MENA ဒေသအတွက် Hays ကုမ္ပဏီဒါကောင်းသောအဘယ်အရာကိုကြည့်ရှိသည်။ ရတဲ့မတိုင်မီက အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖို့အကောင်းဆုံးအငယ်တန်း။ Hays အမြဲလျင်မြန်စွာရှာဖွေနေ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကနေအသစ်အခွက်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, သင်ယူအေအီးအတွက် Hays အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့ကိုအားဖြင့်စုဆောင်းနှငျ့သငျ Hays စုဆောင်းမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ထိတွေ့ရလိမ့်မယ်သေချာအောင်လိမ့်မည်။
HAYS - ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ
BAC အရှေ့အလယ်ပိုင်း ယူအေအီးအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ
BAC ကြောင်းတကယ်တော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရေတွင်းလူသိများသည် နှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်များများအတွက်အရှည်ဆုံးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီ။ ဆက်ဆက်ယူအေအီးသည်၌ဤစိတျထဲတှငျ, BAC စုဆောင်းမှုအတိုင်ပင်ခံနှင့်အတူ တစ် CV ကိုပေးပို့ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခု။ ကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ကုမ္ပဏီအစုဆောင်းမှု busines အတွက်ထိပ်တန်းဖျော်ဖြေဖြစ်ပါသည်s ကို BAC လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်များတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း 1979 ခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, BAC အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ရှေ့တန်းမှမှာယေဘုယျအားဖြင့်ခဲ့ပြီ ယူအေအီးဒေသများတွင်ရှာဖွေစုဆောင်း.
အခြားအစုဆောင်းမှုစက်မှုလုပ်ငန်း BAC ကနေကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်စီမံခန့်ခွဲ အဆိုပါ MENA ဒေသအတွက် 30 နှစ်ကျော်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုစစ်ဆင်ရေး၏အစအဦးကတည်းက ISO9001 လက်မှတ်အောင်မြင်ကြသူကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးအခိုငျအမာဖြစ်လာသည်။ အခြားတစ်ဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပထမဆုံးစှဲတွင်, အဖြစ်မှန်အတွက်ဒူဘိုင်းကဏ္ဍတွင်အလုပ်အကိုင်ပေါ်မယ့်ကိန်းသေအလေးပေးဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုအရည်အသွေးနှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုမကယ်မလွှတ်.
ဒူဘိုင်းမြို့ ManpowerGroup အားလုံးကိုရှာဖွေစုဆောင်းအထက် လျင်မြန်စွာယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာ။ အကောင်းဆုံးကိုအလုပ်အကိုင်က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်နှင့်ဆန်းသစ်မှတ်ပုံတင်သည့်စနစ်စတင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်တော်ကားလုပ်သားအင်အားဖြေရှင်းချက်များအတွက်။ မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်လူအင်အားအတွက် 2018-2019 လူ့အလားအလာချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ် အဆိုပါအများကြီးအစွမ်းထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ManpowerGroup အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းအတော်လေးကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်, ကာတာ, အိန္ဒိယ, ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကယူအေအီးအားလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍများအတွက်စုဆောင်းနှင့် ပိုလန်အတွက်ဥရောပ၌အလုပျအတှကျ။ ယူအေအီး၌လေးအဓိကအမှတ်တံဆိပ်၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ ကုမ္ပဏီဟာယပူဇော်သက္ကာ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီများသည်။ ထို့အပွငျအခိုငျအမာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလူ့အရင်းအမြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာကျွမ်းကျင်သူနှင့်ညာဘက်စီမံခန့်ခွဲမှုငှားရမ်းဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအရာအရပျ၌, ManpowerGroup သက်သက်သာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ တူညီတဲ့ဖက်ရှင်များတွင်လမ်းကုမ္ပဏီ 80 နိုင်ငံများတွင်ကျော်အတွက်စုဆောင်းမှုရုံးများ၏ကွန်ယက်ရှိပါတယ်။ အတူတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့် ဒေသခံယူအေအီးစုဆောင်းမှုစျေးကွက်အပေါ်အသိပညာ။ ထိုမှတပါးအလုပ်အကိုင်စျေးကွက်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှု 20 နှစ်ကျော်အတူ။ ဒါ့အပြင် ManpowerGroup ယူအေအီးအတွက်မိတ်ဖက်ရှိခြင်းစတင်။ ManpowerGroup မှကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးခွငျးအားဖွငျ့သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ဆန္ဒရှိနေသောအလုပ်ရှာဖွေသူများအလငျး၌တည်၏။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏ 85% ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးကိုမြှင့် ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
ထိုစိတ်သဘောကိုအတွက်လူ့အရင်းအမြစ် Group နဲ့ ဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစံချိန်စံညွှန်းများမြင့်တက်လာ။ အားလုံးကုမ္ပဏီအထက်တွင် 35% ထိရောက်မှုမြင့်တက် သူတို့ရဲ့စုစုပေါင်းလုပ်သားအင်အားစီးဆင်းမှုများအတွက်စုဆောင်းမှုကဏ္ဍ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ManpowerGroup နှင့်အတူသစ်တစ်ခုစနစ်ဖြင့်ရိုးရှင်းသောရဲ့ login စုဆောင်းမှုနှင့်အကဲဖြတ်လေ့ကျင့်ရေးတို့ပါဝင်သည် လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အ MBA ဘွဲ့ရ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ကုမ္ပဏီကာတာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ရှိလုပ်သားအင်အားအတိုင်ပင်ခံများအတွက်မြင့်တက်အများကြီးမဟုတ်လုပ်နေတာရပ်တန့်။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်မှာလူ့အရင်းအမြစ်နေဆဲအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်အနေနဲ့ Outsourcing အဘူဒါဘီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်.
ရောဘတ်တစ်ဝက် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ယူအေအီးဂျော့ & ်ထမ်းခေါ်ယူမှု
တကယ်ပါပဲ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမှာအကောင်းဆုံးရှာဖွေစုဆောင်း၏တဦးတည်းဒူဘိုင်း 2018 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရှာဖွေရေးထောက်ပြရန်။ နှင့် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ်လျှောက်ထား။ သငျသညျမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူအဘူဒါဘီအတွက်ပွင့်လင်းရာထူးများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ အပြုသဘောဘက်တွင် သင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကိုက်ညီသောတဦးတည်းအလုပ်ရှာတွေ့။ ယေဘုယျအားစမ်းသပ်မှုများတွင်အကောင်းဆုံးအဘူဒါဘီအလုပ်ခန့်၌သင်တို့၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်များနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွေ့အကြုံကို။ အကောင်းတစ်ထမ်းရှာဖွေသူရောဘတ်တစ်ဝက်တစ်ဦးပုံဥပမာအဖြစ်အမြဲဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီဒေသရှိထိပ်တန်း Forbes မဂ္ဂဇင်းကုမ္ပဏီများနှင့်၎င်းတို့၏ website တွင်ဖွင့်လှစ်နေရာလွတ်ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ် သငျသညျယူခံရဖို့အဘို့အရောဘတ်တစ်ဝက်နှင့်အတူစောင့်ဆိုင်း။
ရောဘတ်တစ်ဝက် - ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ။
မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ် Nadia စုဆောင်းမှုအတွင်းကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်များတွင်အများအပြား cores run ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အစျေးကွက်အဘူဒါဘီနှင့် Sharjah ။ တိုတောင်းတဲ့အကျဉ်း, Nadia စုဆောင်းမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးအတိုင်ပင်ခံအတွက် ဒူဘိုင်းအတွက်အလွန်ပူအလုပ်အကိုင်ရှိသည်။ အနှစ်ချုပ်မှကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်ဖောက်သည်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဘို့ ဒူဘိုင်းအတွက် HR အတွေ့အကြုံထက်ပို 30 နှစ်ပေါင်း နှင့်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်အတွင်း အာရပ်ပြည်တွင်းစျေးကွက်။ စုစုပေါင်း Nadia HR ကုမ္ပဏီအရည်အသွေးမြင့်စုဆောင်းမှုဝန်ဆောင်မှုပေး။
နောက်ခံကုမ္ပဏီအတွက် Little ကနည်းနည်း 1983 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ဒီ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီ အလျင်အမြန် Google ကဂျော့အအောင်မြင်ဆုံးအားဖြင့် 4.70 rated အကြီးဆုံးနှင့်ထိပ်တန်းဖြစ်လာ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အလုပ်ခန့်.
web ပေါ်မှာ Apply: http://nadia-me.com/candidate/index.cfm
မိုက်ကယ် 's Page ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုများနှင့်ဂျော့ဘ်
သောမျှော်လင့်ချက်အတွက် သင်တစ်ဦးရရှိပါမည် ဒူဘိုင်းကယောဘ, ပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားကျွမ်းကျင်သူများ။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုအဘို့ဤရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ညာဘက်သောမျှော်လင့်ချက်အတွက်ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားနေကြတယ်, တစ်ဦးကောင်းကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ပါ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်သတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်သုတေသနပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်သင့်တယ် ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယူအေအီးကယောဘစျေးကွက် 2019 အတွက်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်သင်သည်သိသာအသစ်တစ်ခုတည်နေရာသို့ရွှေ့မတိုင်မီ ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်။ သငျသညျယူအေအီးစုဆောင်းဖို့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတင်သွင်းသည့်အခါထိုအခါစဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ မိုက်ကယ်စာမျက်နှာတို့တွင်အကောင်းလှ၏ ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ။
မိုက်ကယ် 's Page နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ
ယေဘုယျအားဖြင့်အပေါ်မိုက်ကယ် 's Page စကားပြော ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏မြေတပြင်လုံးစုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုသက်ဆိုင်ရာအပိုင်းပိုင်းအရကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်း။ အမြဲအသေးစိတ်မိုက်ကယ် 's Page အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ အလားအလာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အလုပ်မုဆိုးအားလုံးအာရပ်စုဆောင်းမှုစျေးကွက်ကျော်ရွှေ့ကူညီ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စုဆောင်းမှုကဏ္ဍအလေးပေးဖို့ကုမ္ပဏီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူတစ်ဦးပေးရန်လွယ်ကူသောအပ်လုဒ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများလူနေမှုပုံစံစတဲ့သို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးထွင်းသိမြင်မှု.
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ပြန်လည်စတင်သို့မဟုတ်သူတို့အပေါ်မှာနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သူတို့ကိုပေးပို့အဖြစ် သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်နိုင်ပါသည် WhatsApp ကို။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ဒူဘိုင်းသွားဖို့ဘယ်လိုသိပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းယူအေအီးအလုပ် Finder ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောကဝတ်အပေါ်အကြံပေးချက်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ နေရာထိုင်ခင်းယူအေအီးအတွက်အကူအညီ, အဆောက်အဦများနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်မြှင့်တင်ရေးအလုပ်အကိုင်များအပေါ်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များကျောင်းများနှင့်အပါအဝင် သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုအဘို့အဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လို ဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီးနေထိုင်များအတွက်ရိုးရှင်းသောစားဆင်ယင် code ကို။
Adecco အရှေ့အလယ်ပိုင်း Staffing ဝန်ဆောင်မှု
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီလက်ဆောင် GCC အတွက်ထိပ်တန်းစုဆောင်းမှု & အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ။ ကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်များရှေ့တွင်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ HR နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်န်ဆောင်မှုများ။ Adecco အမှတ်တံဆိပ်အလုပ်လက်အောက်တွင်သူတို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အကူအညီနဲ့ရှာဖွေတာဖြေရှင်းနည်းများ, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေ။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ 14,000,000 မှတ်ပုံတင်ထက်ပိုမိုရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ.
နေသမျှကာလပတ်လုံး သငျသညျဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အမြင့်ဆုံးရည်ရွယ်ထားအဖြစ် နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲသငျသညျ Adecco ကုမ္ပဏီအတွက် HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်သငျ့သညျ။ အခြိနျမှနျမှကုမ္ပဏီဒါဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း Careers များအတွက်ငှားရမ်း အလုပ်အကိုင်အမုဆိုးပါကစ္စတန်အလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် Adecco အလုပ် site ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှပိုင်ဆိုင်မရှိမေးခွန်းများကိုမေး၏။ အဘို့ အလုပ်ရှာဖွေ၏ရည်ရွယ်ချက် ထိုကုမ္ပဏီသင်သည်သင်၏ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ပေးထားပါတယ်။ Adecco နှင့်အတူဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သငျသညျကလူယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းလမ်းကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ Adecco တစ်ခုဖြစ်ပါသည် မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများတို့တွင်အကောင်းဆုံး.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ Adecco န်ဆောင်မှုများ
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, Adecco, ဥရောပ, ကာတာနိုင်ငံ, အမေရိကန်, ကနေဒါအတွင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်း၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း အာရှတိုက်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကို Adecco နှင့်အတူ ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အမုဆိုးဆက်သွယ်ထားသော။ နေ့တိုင်း clients များဤထမ်းရှာဖွေသူအားဖြင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်း 650,000 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများထက်ပိုဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ Adecco ကုမ္ပဏီကျယ်ပြန့်အတော်ကြာအမျိုးအစားကကမ်းလှမ်းစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများအပြင် ဝန်ထမ်းများသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်။ ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းနေရာချထားအဖြစ်အခြားဝန်ဆောင်မှုများဖော်ပြခြင်းမ, ယူအေအီးမှအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကူးအပြောင်း။ ထို့အပြင်အိမ်ထဲအခွက်တဆယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကုမ္ပဏီဥရောပကနေပြင်ပကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူ No.1 ဖြစ်ပါတယ် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်အကိုင်အတိုင်ပင်ခံ နှင့်ယူအေအီး။
ဒူဘိုင်းအတွက်ယာဉ်မောင်းများနှင့် Uber ဂျော့ဘ်.
အိုင်တီ & ယူအေအီးအတွက်တယ်လီကွန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။
FMCG & ဘူဒါဘီအတွက်လက်လီနေရာလွတ်။
ကာတာနိုင်ငံအတွက်ဘဏ္ဍာရေး & စာရင်းစစ်ရာထူး။
Robbert Murray အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဘကိုရှာဖွေသူများအဘို့အယောဘသည်အတိုင်ပင်ခံ
ယူအေအီးအတွက် Robbert Murray ထိပ်တန်း်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီ။ တဦးသာ ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်များ ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ကောင်းသောအခွက်တဆယ်ရှာဖွေနေကုမ္ပဏီ။ ကျော်ကြားတဲ့အလုပ်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက် Robbert Murray အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုဘကျ၌ထဖို့စီမံထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, တစ်ထမ်းရှာဖွေသူနှင့်အတူဤဒူဘိုင်းအလုပ်က်ဘ်ဆိုဒ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် သိသာထင်ရှားသောကမ်းလွန်ရှိနေခြင်း ငှားရမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီ၏အဓိကအချက်တစ်ချက်ယူအေအီးအသစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကြီးထွားကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ Robbert Murray ဦးဆောင်စုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ် သငျသညျမှတျပုံတငျသငျ့ကွောငျးယူအေအီးအတွက်ကုမ္ပဏီများမှ အတူ။ ရေရှည်မှာခုနှစ်, သငျသညျဆိုပါက ဒီထမ်းရှာဖွေသူနှင့်အတူချိတ်ဆက် သငျသညျအတွင်းထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်ထိမှန်ပါလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းအတွက်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများသည် နဲ့လန်ဒန်။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌အလုပ်နေရာလွတ်တည်ရှိသည်နေရာတိုင်းမှာသောအဆုံးကာတာနိုင်ငံ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့မဟုတ်ပင်ကမ္ဘာတဝှမ်း Robbert Murray မှ CV ကိုပေးပို့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်မှုအတွက် Robbert Murray အလုပ်အေဂျင်စီ
ဤအချက်များအားကုမ္ပဏီတစ်ခုပြည့်စုံ LinkedIn တီထွင်ထားသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစုဆောင်းမှု HR ကွန်ယက်ကို။ သင်တစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ဖွင့်ဖြစ်နိုင်အောင်အနှစ်သာရမှာတော့လုံးဝကိုသူတို့ကမ္ဘာအနှံ့ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်တည်ရှိသည်။ ထိုကုမ္ပဏီ၏စုဆောင်းမှုကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးအတွက်သူတို့ကိုချပြီးသည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးအတူတကွချိတ်ဆက်ကူညီပေးရန်စုံလင်သောအနေအထား။ အပြုသဘောဘက်သင့်လျော်သော headhunter တွင် ဒူဘိုင်းတွင်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကူညီခြင်းနှင့်ယူအေအီး၌ထားရမည်.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒီ အလုပ်အကိုင်အ site ကိုဒူဘိုင်းချိတ်ဆက်နှင့်အတူကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုကူညီပေးပါ။ ထိုအခါအကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအခြေခံတဲ့သူနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများအတွက်အတွင်းအထူးတာဝန်တွေပါစေ။ ဒူဘိုင်းအတွက် Robbert Murray အလုပ်အေဂျင်စီ 1995 ကတည်းကငှားရမ်းကြောင်းအဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးတာဝန်ဝတ္တရားများ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ကော်ပိုရိတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်.
ရွေးချယ်ရေးလာအောင်နှိုးဆွ - ဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအတွက်ဦးဆောင်အလုပ်ခန့်
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရွေးချယ်ရေးရှာဖွေနေကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်လာအောင်နှိုးဆွ ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဂေငျြစီ။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အခြားတစ်ဖက်တွင်။ ယူအေအီးအတွက် Inspire ရွေးချယ်ရေးအေဂျင်စီ 3,000,000 ကျော်ကူညီပေးသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေရန်။ ပိုပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပိုပြီးအလုပ်အကိုင်များကိုတွေ့လိမ့်မည်မျှော်လင့်ကြောင်းခုနှစ်တွင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဆိုက်နှင့်ကူညီဖို့နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကြှနျုပျတို့သညျဤဆက်ပြောသည်ရှိသည်ဟုလွယ်ကူသည်မဟုတ် ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူများအစာရှောင်ခြင်းအလုပ်ကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ယူအေအီးအလုပ်ပေါ်တယ်.
Inspire ရွေးချယ်ရေး - ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများသည်။
Randstad အရှေ့အလယ်ပိုင်းများအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့် HR န်ဆောင်မှုများ
ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ MENA အတွက်အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်။ Randstad တက် ယူအေအီးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများစျေးကွက်ကျော်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကုမ္ပဏီ created အိန္ဒိယများအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ရှာဖွေသူများက်ဘ်ဆိုက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ Randstad မှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတာအပြုသဘောဘက်တွင်ပြုလုပ်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဧရာအတူစိမ်းဖြင့်မကြာခဏ updated က်ဘ်ဆိုက် ကျွမ်းကျင်သူစုဆောင်းမှုအတိုင်ပင်ခံ.
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ Allow အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှာဖွေသူတို့ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအထဲကအလုပ်မလုပ်။ သင်ထမ်းရှာဖွေသူဖြစ်လာမှရှာဖွေနေလျှင် Randstad နှင့်အတူနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အစိုးရအတွက်ဆုလာဘ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရာပူဇော်သက္ကာကိုကုမ္ပဏီ မရင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာစုဆောင်းမှုစက်မှုလုပ်ငန်း။ အနှစ်ချုပ်ရန် သင်သည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘ၏ထိန်းချုပ်မှုယူနိုင်ပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်ကျော်နှင့် Randstad HR ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတစ်ထမ်းရှာဖွေသူအနေအထားများအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
Randstad Mena ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအကြောင်း
တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Randstad MENA အတူလူသိဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီ။ ထိုအခါယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခု။ နောက်ဆုံးတော့များသောလူများ Randstad ဦးပိုင်တစ်ဦး $ 28.3 ဒေါ်လာဘီလီယံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင်းကိုငါသိ၏။ အဆိုပါတခါထဲ ကုမ္ပဏီဆယ်စုနှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးကို HR န်ဆောင်မှု createds ကို။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန် Randstad တစ်ဦးနှင့်အတူတက်မှတက် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်တောင်အာဖရိကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်မူထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်။ အတူစတင်, core ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့်လူ့ကျွမ်းကျင်မှု Randstad နှင့်အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတကာလုပ်သားအင်အားအဘို့အစုဆောင်းမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်အွန်လိုင်းတစ်ဦး Randstad ကုမ္ပဏီမြင်လိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမန်နေဂျာတဦးလျှင်ထိုအတောအတွင်း, သင်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲကြိုတင်အလုပ်အကိုင်များကိုစတင်နိုင်ပါသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ.
ရုတ်တရက်ပေမယ် ANOC စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီအားလုံးသည်ရုံရိုးရှင်းတဲ့စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီမဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီနောက်ဆုံးမှာရည်ရွယ်ထားအကြောင်း အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတန်ဖိုးကိုကို။ ANOC သငျသညျကိုကျော်လာနိုင်ပြီးအနည်းဆုံးစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်မကျြနှာကိုပြောနေတာအတွက်အလုပ်အကိုင်များကိုတညျဆောကျနိုငျတဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်4အခက်များရှိပါတယ်။ ဒီအံ့သြဖွယ်ထမ်းရှာဖွေသူနှင့်အတူစတင်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် ANOC မှဖုန်းခေါ်ပေးပါ။
သငျသညျခဏအတွက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ပြီးကတည်းက စီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှာကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတွင်သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ ANOC ရဲ့ရန်သင့်အခွက်တဆယ်နှင့်ကျောင်းအရည်အချင်းများတခုအဖြစ်ရှာဖွေသင့် hard အလုပ်၏အချိန်ကိုအတိုကောက်နိုင်ပါတယ်။ ရှင်းမှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်မုဆိုးဘို့အကောင်းတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲကုမ္ပဏီ သူတို့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အနာဂတ်အလားအလာအလုပ်ရှင်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ပလက်ဖောင်းကိုသုံးနိုင်သည်ရှိရာ။ ဒါကအလုပ် site ကိုဒူဘိုင်းအတွက်ကောင်းသောစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလုပ်အကိုင်အကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers ဖြေရှင်းနည်း။ ကြည့်ဖူး လူတွေကိုအလုပ်အကိုင်ရဖို့ကူညီပေးနေအိန္ဒိယကနေကျွမ်းကျင်သူများ.
ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers နှင့်အတူဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရှာဖွေစုဆောင်းတို့တွင်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်, ဂျယ်ရီ Varghese ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်စုဆောင်းမှုဖြေရှင်းချက်အတွင်းဦးဆောင်စုဆောင်းမှုအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်းငှားရမ်းရာထူးနှင့်အတူဒွန်တွဲ။ ဂျယ်ရီ Varghese အကောင်းဆုံးနဲ့ထိပ်ဆုံး rated အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာဘက်ပေါင်းစုံနဲ့ပြည့်စုံစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်.
သငျသညျဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers အသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ချိန်တည်းမှာပင်။ ကျိန်းသေ, သူတို့ကကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောပေး ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာနေရာချထားမှုကို။ သငျသညျအလုပ်မလုပ်နိုင်သောနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အစိုးရအလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကုမ္ပဏီမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာခိုင်ခံ့ရှိနေခြင်းရှိခြင်းနှင့်သူတို့ 30 နှစျကျြော operated။ အပြုသဘောဘက်တွင်သင်သည်ဤစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေကြဘူးသည့်အခါ။ သင်တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများန်ဆောင်မှုများမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်မဟုတ်ပဲ။
ပြီးခဲ့သည့် 25 နှစ်ပေါင်းအဘို့, ဂျယ်ရီ Varghese အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလည်းအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်တို့ပါဝင်သည်ကြောင်း။ ကုမ္ပဏီကအကောင်းဆုံးများထဲမှကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ရှာအပေါ်သူတို့ရဲ့အလုပ်သမားရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်မှုစျေးကွက်.
ဤအကြောင်းကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့မှကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ အဖြစ်ကအရမ်းကောင်းစွာစုဆောင်းစျေးကွက်၏ကုမ္ပဏီနားလည်မှုအထက်ပြ။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်၌, ထိုသူတို့အဘို့ရှာဖွေအလုပ်အကိုင်အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ တိုင်း အဆိုပါ GCC အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အသက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူ.
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ကျနော်တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါ။ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီလက်ငင်းမှာသင်တို့သည်ငါတို့၏ဒေတာဘေ့စဖို့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာ profile များကိုအောက်ပါ 2016 အလုပ်ရှာခြင်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကျော် 350,000 ကတည်းက။ ဒူဘိုင်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအားမရ၏ရည်ရွယ်ချက်, ကြှနျုပျတို့ဆက်ဆက်၏တဦးတည်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်များ.
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထား, ငါတို့စုဆောင်းမှုအတိုင်ပင်ခံထဲမှာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည် ဒူဘိုင်းဂျော့၏အောင်မြင်သောနေရာချထား။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအမြဲတမ်းယာယီ full-အချိန်သို့မဟုတ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်ရာထူး, စျေးကွက်နှင့်အရောင်းထဲမှာန်ထမ်းဖြစ်လာသေချာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒူဘိုင်းဟိုတယ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု, ဆေးပညာ, စာရင်းကိုင်ပညာ, ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး, အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ.
၏ရည်ရွယ်ချက် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအားဖြင့်သင်တို့ကိုပိုမြန်မဆိုအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု 5x အတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျမှတျပုံတငျခွငျးအဘို့ကိုသာ $5ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့မူကား, ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်အဘို့ကျွန်တော်တစ်ဦး 100% ပြန်အမ်းငွေကိုပေး။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း သင်တို့သည်ငါတို့၏အလုပ်ရှာဖွေဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်လျှင်သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိကျနော်တို့ 80,000 ကျော်ထားရှိပါပြီ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့ 20,000 အတွက်လာမည့် 2018 နေရာရှာကြ၏။